PLaCSH ဟုခေါ်သော ပစ္စည်းအသစ်တစ်မျိုးကြောင့်ဆိုလာဆဲ(လ်) များ၏ စွမ်းအားကို သုံးဆမြင့်တင် ပေးနိုင်တော့မည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Science & Religion » PLaCSH ဟုခေါ်သော ပစ္စည်းအသစ်တစ်မျိုးကြောင့်ဆိုလာဆဲ(လ်) များ၏ စွမ်းအားကို သုံးဆမြင့်တင် ပေးနိုင်တော့မည်
PLaCSH ဟုခေါ်သော ပစ္စည်းအသစ်တစ်မျိုးကြောင့်ဆိုလာဆဲ(လ်) များ၏ စွမ်းအားကို သုံးဆမြင့်တင် ပေးနိုင်တော့မည်
ယနေ့ခေတ်တွင် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုသည် ခေတ်စားလာပြီး ၎င်းနှင့် ပတ်သက်သော စီးပွားရေးမှာလည်း လျှင်မြန်စွာ တိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ဆိုလာနည်းပညာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည် မျှော်မှန်းထားသလောက် ဖြစ်မလာခဲ့ပေ။ အဓိကအကြောင်းအရင်းများမှာ လျှပ်စစ် စွမ်းအင်သို့ပြောင်းလဲပေးနိုင်မည့် နေရောင်ခြည်ကို ဆိုလာဆဲ(လ်)များမှ အပြည့်အ၀ မစုပ်ယူနိုင်ခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း၊သို့မဟုတ် ဆိုလာဆဲ(လ်)များမှ နေရောင်ခြည်အများစုကို အလင်းပြန်သွား စေခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း ဖြစ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ ပရင်စတန်တက္ကသိုလ်မှ သုတေသနပညာရှင်များက ” Plasmonic Cavity with Subwavelength Hole array” ဟုခေါ်သည့် ဆင်းဒ၀ှစ်(ခ်ျ)မုန့်ပုံစံ ပစ္စည်းတစ်မျိုးကို တီထွင်လိုက်ပြီး ၎င်းသည်အလင်းပြန်မှုကို လျှော့ချပေးခြင်းနှင့် နေရောင်ခြည်ကို ပိုမိုစုပ်ယူပေးနိုင်ခြင်းစသည့် ဂုဏ်သတ္တိများ ရှိသဖြင့် ဆိုလာဆဲ(လ်)များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို သုံးဆမြင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။
၎င်းတွင် အလွှာငါးလွှာပါဝင်ပါသည်။ ပထမအလွှာကို Window Layer ဟုခေါ်ပြီး အပေါက်လေးများ ပါဝင်ကာ အပေါက်တစ်ပေါက်၏ အချင်းမှာ ၁၇၅ နာနိုမီတာ(175nm) ရှိပြီး အထူမှာ၃၀ နာနိုမီတာ (30nm) ရှိပါသည်။ နေရောင်ခြည်သည် ၎င်းအလွှာကို ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ပါသည်။ ဒုတိယအလွှာမှာ ဖောက်ထွင်း မြင်နိုင်သော ပလတ်စတစ်အလွှာဖြစ်ပြီး အထူမှာ ၁၀ နာနိုမီတာ(10nm) ရှိပါသည်။ တတိယအလွှာမှာ ပလတ်စတစ် တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း (Plastic Semicondustor Material) ဖြစ်ပြီး အထူမှာ ၈၄နာနိုမီတာ(85nm) ရှိပါသည်။ စတုတ္ထအလွှာမှာ Titanium Oxide ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး အထူမှာ ၅ နာနိုမီတာ(5nm)ရှိပါသည်။ ပဉ္စမအလွှာမှာ အလူမီနီယံဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး အထူမှာ ၁၀၀နာနိုမီတာ(၁၀၀nm) ရှိသဖြင့် စုစုပေါင်းအထူမှာ ၂၃၀နာနိုမီတာ(230nm) ရှိပါသည်။ PLaCSH သည် ဈေးနှုန်းသက်သာသဖြင့် အနာဂတ်ဆိုလာ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုတွင် နေရာယူလာလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
မြန်မာပြည်ပေါ်ကနေက.. အီကွေတာနဲ့နီးတော့..” လောင်”နေအောင်ပူတာ..
အဲဒီဆိုလာဆဲလ်တွေနဲ့.. စနစ်တကျလုပ်ရင်.. အိမ်နီးချင်းတွေကို.. စွမ်းအင်ပြန်ရောင်းစားလို့ရတဲ့အခြေအနေအေးဆေး ရောက်မယ်..
“နေရောင်ခြည်တွေသတ်ခံနေရပါတယ်.. နေရောင်ခြည်ကို ကာကွယ်ကြ “ဆိုပြီး.. ဆန္ဒတော့မပြကြနဲ့ပေါ့..။
ဒီမယ် သူကြီး အဲ့လောက်လည်း မရွဲ့ပါနဲ့
ဒီဆိုလာစွမ်းအင်အကြောင်း ပြောဖူးပါတယ် အရင်က။
ခုဆို ရင် ချိုင်းနားက သွင်းတဲ့ ဆိုလာရော လျှပ်စစ်ပါ တွဲသုံးရတဲ့ ရေပူစက်တွေ ဆိုတာ သုံးလို့ ကောင်းတယ် နောက်ပြီး ရွာဖက်တွေ သုံးတဲ့ ဆိုလာသုံး လျှပ်စစ်တွေဆိုတာကလည်း တွင်ကျယ်နေပြီ အကုန် ချိုင်းနား မိတ်ချည်းပဲ
ခုလို PlaCSH သာ ဈေးနှုန်းချိုမယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာတပြည်လုံး မီးလင်းဖို့ မျှော်လင့်ချက်နီးပြီပေါ့
ဒါမှ ရောင်းစားရင်လည်း ပြောချင်တော့ပါဘူး
ထစ်ဆိုဆန္ဒပြနေတော့.. ချိုင်းနားပြပြ.. ဟိုထောင့်နားကကြောင်ကိုသွားပြပြ..
ဒီဆန္ဒပြတာတွေက.. ငါ့အလှည့်များရောက်လာနိုင်သလား.. တွေးလန့်တာပေါ့..
Risk ယူရမယ်ဆိုပေမယ့်.. လူအုပ်လိုက်ကြီး ထ ဆန္ဒပြလို့.. အူကြောင်ကြောင်နဲ့.. အလုပ်ထိခိုက်..ငွေဆုံးရှုံးရမယ့် စွန့်စားတာမျိုးတော့..ဘယ်ငွေရှင်ကမှမလုပ်ချင်..
လွယ်လွယ်ပဲ.. ချိုင်းနားထဲ.. ငွေသွားထည့်ပြီး..တဆင့်ထပ်ခိုင်းတော့မယ်တွေးနေသူတွေတောင်ရှိကုန်ပြီ..
အဲ့ဒါပြောတာပေါ့ မသိခြင်းသည် အင်အားဆိုပြီး လူထုကို အသုံးချ ဆန္ဒပြခိုင်းနေတဲ့ နွားတွေကို ရှေ့ထုတ်ပြီး သုတ်သင်ရမှာလေ
ကယ်ကြပါအုန်း အရပ်ကတို့ ရယ် ဒီတသက်တို့ပြည်တို့ရွာတော့ ဒီဘ၀က လွတ်ရန် လမ်းမမြင်
မုဆိုးဖိုကျယူချင်တယ် ကလေးကျ လက်မခံလို့ရမလားဗျ.
အဲ့လာကြောရာပေါ့ အလင်းရောင်နဲ့အတူ အပူပါပါလာမှာဆိုတာ.
ကောင်းပ့တယ်ဗျာ. ပူရင် ဒူဘိုင်းလို အဲကွမ်း သုံးမှာပေါ့.
သတင်းကတော့ သတင်းကောင်းဘဲ။ တကယ်သာ ချသုံးခွင့်ရရင် အတော်လေးအကျိုးရှိမယ်။
ကျမတို့ ရုံးကဖွင့်ထားတဲ့ လှိုင်သာယာဆေးခန်းမှာ Lighting အတွက် ဆိုလာသီးသန့်သုံးတယ်။
သိန်းတစ်ရာကျော်ဖိုး ဆင်ထားတဲ့ ဆိုလာစစ်စတမ်က တနှစ်ကျော်တော့
အာမခံလဲမရှိဘူး။ အလကားဖြစ်သွားဘီ။ :gee: